Kpido: sms n'asọmpi | Martech Zone
Tag: sms asọmpi
SlickText: Gini bu njiri mara na mmekorita nke SMS Platform Platform?
Tọzdee, Disemba 8, 2020 Wednesday, December 23, 2020 Douglas Karr
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche banyere ozi ederede dị ka ike izipu ozi ederede na onye debanyere aha. Agbanyeghị, ozi SMS na ozi MMS agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ. Ewezuga ihe nnabata ndị achọrọ, usoro mgbasa ozi ozi ederede agbanwewo nke ọma site na plethora nke ntinye aka, akpaaka, nkewa, ịhazi onwe ya, yana ike mwekota. SlickText bụ ihe eji eme ka ozi ederede zuru oke, nke bara ọgaranya nke siri ike maka azụmaahịa bụ isi chọrọ ịme ụfọdụ ederede na-enye ha niile